Barcelona Oo Kulankii Xalay Ee Villarreal Samaysay Shaqo Ku Adkayd Tan Iyo Bishii August & Jamaahiirta Kooxdaas Oo Ay Farxad U Tahay - Gool24.Net
Barcelona Oo Kulankii Xalay Ee Villarreal Samaysay Shaqo Ku Adkayd Tan Iyo Bishii August & Jamaahiirta Kooxdaas Oo Ay Farxad U Tahay
Kooxda Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan oo dhan ku dhibtoonaysay booska daafaca dambe isla markaana ay ku adkayd inay shabaqeeda ilaashato kulamadii ugu dambeeya ee horyaalka La Liga.
Goolhaye Marc-Andre Ter Stegen ayaa si weyn ugu raaxaystay kulankii ay xalay kooxdiisu guusha ka gaadhay Villarreal kaddib markii daafacyada kooxdiisu ay aamusiiyeen xiddigaha Yellow Submarine si uu u helo shabaq nadiif ah markii ugu horreysay ee 11 kulan oo La Liga ah.
Goolhayaha ree Germany ayaan samayn hal bad-baado kulankii xalay ka dhacay Camp Nou xilli kooxda Villarreal ay ku fashilantay inay gool dhaliso kulankii labaad oo xidhiidh ah.
Kulankan ayaa ahaa markii ugu horreysay ee ay Barca shabaqa ilaashato tan iyo kulankii ay guusha 0-1 ah kasoo gaadheen Valladolid dhammaadkii bishii August ee sanadkan waxaana tan iyo markaas kooxda laga dhaliyay 19 gool.
Villareal ayaan dedaal badan u samayn sidii PSV oo saddex jeer garaacday birta Barcelona kulankii ka qabsoomay Endhioven ee Champions League marka laga reebo in Gerard Moreno uu hal isku day ku dhuftay birta.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa toddobaadkan gaadhay guul muhiim u ah xilli ciyaareedkeeda La Liga isla markaana dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalkaas.